inona ny serivisy ho an'ny mpanjifa?
Mamaly ao anaty 24 ora.
Hanolotra ny horonan-tsary fametrahana izahay, ary koa ny boky torolàlana momba ny asa hanampiana ny mpanjifa hametraka irery ny masinina.
Azonao atao ve ny manamboatra ny masinina mifanaraka amin'ny zavatra takiko?
Ie! Omena serivisy namboarina.
Ahoana ny kalitaon'ny masinao?
Izahay dia mampiasa marika malaza amin'ny faritra misy herinaratra miaraka amin'ny fahombiazan'ny firafitry ny anatiny, ny fikirakirana avo lenta amin'ny fiainana fampiasana lava kokoa, ary ny fisehoana ivelany koa. Ireo injenieranay mahery dia manana traikefa momba ny R&D mihoatra ny 10 taona amin'ity sehatra ity, mampiasa firafitra / famolavolana matotra foana izahay ho an'ny masininay.
Inona ny fandoavana?
T / T dia ho tsara kokoa amin'ny famindrana haingana ary fandoavam-bola vitsivitsy. Mety ekena koa ny L / C, saingy sarotra ny fomba fiasa ary avo ny sarany. Azonao atao koa ny mampiasa Western Union sy fiantohana ara-barotra hafa.
Fotoana firy ny ora fanaterana?
Matetika ny 20 ka hatramin'ny 45 andro.
Ahoana ny fonosana ho an'ny milina？
Ny milina dia hipoka amin'ny sarimihetsika manohitra ny hamandoana, ary koa ny hazo na paleta vy eo ambany izay mora entina miakatra ny masinina
Inona no fiteny amin'ny PLC an'ny masininao? Azo atao ve ny mampiasa ny fitenintsika manokana?
Ny torolàlana momba ny PLC dia amin'ny teny anglisy. Ie. Alefanay aminao aloha ny torolàlana amin'ny teny Anglisy, avy eo adikao amin'ny fiteninao ihany ary averinao aty aminay. Avy eo izahay dia afaka manao azy amin'ny fiteninao araka ny fandikanao.
Inona ny CODE HS an'ny vokatrao?
Edger vera, edger roa, edger endrika dia 84642010. Glass beveller, driller vera, vera fitaratra dia 84649019. Ny vera fanasan-damba dia 84248999. Ny vera sandblaster dia 84243000.